Ushwele wentela eSpain | Ezezimali Zomnotho
Ngaphambi kokudalwa Isikhungo Sentela, osonhlalakahle bebesebenzisa ukujwayela okuthile, futhi muva nje sekushiwo okuningi nge ukwenziwa kwentela okungavamile nemiphumela ezibophweni zentela zabakhokhi bentela ngaphansi kwayo.
Ukukhuluma nge ushwele wentela eSpain, okokuqala kuyadingeka ukwazi incazelo ye- igama "ushwele" kusukela ekuqaleni. Umqondo wawo uthi ushwele yilapho uMbuso unikeza intethelelo ukwephula ezepolitiki, kungaba yizikweletu ezithile noma ubugebengu.
Ngakolunye uhlangothi, ushwele wentela Kuyaziwa njengesilinganiso esisetshenziswayo, ngesikhathi esithile, ukuxolela labo abangahambisani nezibopho zabo zentela ngaleso sikhathi, lokhu kusetshenziswa umthetho othize okhuluma ngokungahambisani nomthetho ngaphakathi kohlu, ukufihla imali okungeyona eyabo futhi bayigcine kubo. Umuntu othintekile unikezwa i- setha isikhathi sokukhokha isikweletu ukuze uthole uhlobo oluthile lokuthethelelwa.
Kunezinhlawulo ezinikezwa abantu ababanjwe ushwele ngenxa yezikweletu futhi banosuku lokuphelelwa yisikhathi. Lokhu kusho ukuthi umuntu okweleta imali unesikhathi esinqunyiwe sokukhokha impahla eyebiwe.
Ngokulandelayo sizokhuluma kancane kancane ngokuthi uyini ushwele wentela, nangabanye izici nemiphumela yazo ephawuleka kakhulu.
1 Ushwele wentela nemiphumela yako
2 Ukusebenza kukashwele wentela
3 Isebenza kanjani?
4 Ukukhathazeka kokuqala
5 Ama-amnesties entela ahlukene nobukhulu bawo
6 Uxolo ngo-2012
7 Ushwele wentela namuhla
Ushwele wentela nemiphumela yako
ESpain ezinye intela yentela yobukhulu obuhlukahlukene nemiphumela, njengalowo owaziwa kakhulu Isimemezelo Sentela Esikhethekile, ekhuluma ngezimpahla ezimenyezelwe kanye nemali efihlwe ngaphakathi kwezindawo zentela nokheshi. Ukuze ungaholeli ezijezisweni zobugebengu, umuntu okhokha imali esikweletini unikezwa kanye no-10% owengeziwe.
Ukusebenza kukashwele wentela
Kungathathwa njengenzuzo ye- abakhokhisi bentela ngoba ithethelela izikweletu nezinhlawulo zomgcinimafa, futhi lolu hlobo lokujwayela ukwenziwa eSpain ngenyanga kaNovemba 2012 nguhulumeni kaMariano Rajoy owayenenkinga yonyaka eLa Moncloa, eyayiqukethe hlanganisa impahla engachazwanga ngentengo eyodwa engu-10% ezinkampanini eziqhathe uMgcinimafa nganoma iyiphi indlela.
Kulokho okwenziwe njalo bekufanele umemezele kuphela izimpahla noma imali engenayo engazange imenyezelwe ngaphambili futhi kusobala ukuthi akubhalwa ngaphambilini; kulokhu kufanele sikhumbule iqiniso lokuthi incwadi kadokotela engaphakathi kwesilinganiso sentela yiminyaka emi-4, noma ngabe esimweni samacala entela umuthi uneminyaka emihlanu, futhi ezimweni ezibhekwa njengokungajwayelekile, incwadi kadokotela ifinyelela eminyakeni eyishumi.
Ake sithi Ukudluliswa komhlaba ngonyaka ka 2000 futhi kwaqoqwa ingxenye yemali, eyayingama-euro ayisigidi, engazange imenyezelwe, imali eyadluliselwa ebhange elivela kwamanye amazwe. Manje, uma sibheka lokhu, masikhumbule ukuthi esimisweni esivamile sokukhokhiswa kwentela okuvunyelwane ngaso ngoNovemba 2012, akufanele kufakwe i-10% yezigidi zama-euro, ngoba ukutholwa kwaleyo mali kwenziwa ngonyaka ka-2000, unyaka lapho kunqunywa khona ukutholwa kwemali engenayo.
Ngempela, obekufanele ngabe Kumenyezelwe ukuthi isivuno esitholwe nge-euro eyizigidi eminyakeni emine edlule, leso bekuyisivumelwano sokulinganiselwa.
Yikho kanye lokhu okuqukethe incwadi kadokotela; imali engenayo eyenziwe ngonyaka ka-2000 isivele ibekiwe ngonyaka ka-2012. Inkinga okukhona kuyo le nkinga kuzokwazi ukukhombisa ukuthi bekuyimali engenayo ngempela eyenziwe ngonyaka ka-2000, kanye nokukhombisa ukuthi imali engenayo akuveli empeleni kunoma yiluphi uhlobo lomsebenzi wobulelesi.
Ushwele wentela ukhulule umkhokhi wentela uma enza njalo, kepha kuphela uma isenza kabusha isikweletu sentela ebesingasithola, kepha angikaze futhi kungabi bikho bunye ubugebengu obungeyona intela njengokukhishwa kwemali ngokungemthetho.
Kulokhu okushiwo ngenhla, i-10% ye ibuya eminyakeni emine edlule Ngefomu 750 yenyanga kaNovemba 2012 yokuqokwa kwentela okungajwayelekile futhi, kusukela ngo-2013, ngaphakathi kwefomu 720 ekhuluma ngokumenyezelwa kwempahla phesheya, kwaziswa kuphela ukuthi kwi-akhawunti yasebhange etholakala phesheya izigidi zamarandi ziyagcinwa.
Kuze kube manje sisenze sahleleka ngokuphelele isikweletu sentelaNgakho-ke, kusobala ukuthi imodeli engu-750 yokulungiswa kwentela kanye nemodeli engu-720 yokumenyezelwa kwempahla phesheya akudingeki ngaso sonke isikhathi ihlangane uma kukhona enye yemali engenayo ababefuna ukuyimemezela ngesikhathi sika-2012 yayivele ibekiwe ngoba ngaleso sikhathi yayingenayo ukumenyezelwa.
Lokhu kuthathwe njengesihloko sengxoxo muva nje, ngoba ngokwenziwa kwentela okungajwayelekile ubugebengu bentela buyagwenywa kepha hhayi bonke ubugebengu obungaba khona ngenxa yemvelaphi yalezo zimpahla ezingamenyezelwanga osukwini lwabo.
Abanye abahloli babecabanga ukuthi ukuxolelwa kwentela kungasho ukuthi unembeza wentela wabakhokhi bentela abathile abathembekile uzocindezelwa, nokuthi lokhu kuzothinta ukuqoqwa ngezikhathi zokuzithandela.
Lokhu kwakuyimbangela yemiphumela ehlukene, kufaka phakathi ukuwohloka kwe- unembeza wentela kwezinye izakhamizi futhi lokhu kwadala ezinye izikhalazo, njengoba abanye abantu babethambekele ekutholeni ushwele, benomcabango wokuthi wonke amacala abo entela ayezoxolelwa, bazithola sebenezinkinga zomthetho ngesikhathi kwaziwa ukuthi imali ekulo Mpikiswano inobugebengu imvelaphi.
Ama-amnesties entela ahlukene nobukhulu bawo
Kwenziwe intethelelo eyehlukene eSpain yomthethosisekelo, kepha kulokhu uMgcinimafa ukwazisile iqiniso lokuthi yize amacala entela ezothethelelwa, imvelaphi yemali izophenywa nganoma iyiphi indlela, ngoba uma kwenzeka ingekho emthethweni, kuzothathwa ezinye izinhlobo zezinyathelo.
Noma kunjalo, esimweni se- ushwele wentela akudingekile ukuthi ubheke imvelaphi yemali, njengoba uMgcinimafa engaphenya ngaphakathi kwengxenye yezimali hhayi leyo esemthethweni. Lokhu akusho ukuthi umuntu angaxolelwa noma yikanjani, ngoba uma imali ingemvelaphi engekho emthethweni, lokhu kungatholwa ngokuhamba kwesikhathi ngenxa yezinhlobo ezithile zezinyathelo, njengophenyo oluthile lwenkantolo olubhekele ukwenziwa kobukhosi ngendlela efanele, noma uhlobo oluthile lokuhlunga.
Ngo-2010, kwatholakala amanye ama-akhawunti angafani eHSBC ezweni laseSwitzerland, ngenkathi uJosé Luis Rodríguez Zapatero esaphethe. Kube wukuphikelela kukahulumeni ukuthi abanikazi abahlukahlukene bama-akhawunti ahlukene ababambe iqhaza kule ngxabano. Kulokhu, abahloli babengabakhalazi ngalolu hlobo lwezokwelapha njengesixwayiso kubakhwabanisi.
Ushwele wentela owavunywa uhulumeni ngo-2012 yamukele abakhokhi bentela ababalelwa ku-31.484 ababefihle imali bengazwakalanga ukuthi bayini. Kwavela ngaphezu kwama-euro ayizigidi ezingama-40.000 kanti izigidi eziyi-1.200 XNUMX zaqoqelwa uMbuso.
Abantu abaningi abaziwayo bathinteka kulo mshwele wentela owavunywa ngo-2012, lapho i-Tax Agency yamemezela khona ukuthi abanye babakhokhi bentela babephenywa kanzima ngale mali, kwazise kwakunezinkomba zokuthi kwabanjwa imali ngokungemthetho. Kulabo abathintekile kubalwa osopolitiki, amajaji, abashushisi namanxusa.
Ushwele wentela namuhla
Kuzobekwa uphawu ngaphambi nangemva kokuxolelwa kwentela eSpain, ngoba NgoJuni 30, 2017 kuzobekwa amacala okugcina labakhokhi bentela kulo shwele, lapho imali ifihliwe engakaphenywa yi-Tax Agency eSpain, amacala enziwe ngaphambi kokudalwa kweSimemezelo Sentela Esikhethekile ngoJuni 2012.
Kumenyezelwe ukuthi izikweletu ezigcina uhlobo oluthile lobudlelwano nezintela zizongena eminyakeni emine uma kwenzeka zingasenzi isimangalo esinegunya. Lokhu ngaphandle kwezikweletu ezingaphezulu kwama-euro ayizi-120.000, okubhekwa njengecala lentela futhi kunesilinganiso semikhawulo efinyelela eminyakeni emihlanu. Qaphela ukuthi uma ifinyelela kuma-euro ayizinkulungwane ezingama-600.000, kusetshenziswa isandiso sethemu esingahle sibe yiminyaka eyi-10.
Kwenziwe nezikhathi ezibekiwe zokudalula imali efihliwe kusuka ku-2008 kuya ku-2010.
Lapho-ke, lapho kufika uJuni 30, 2017, abakhokhi bentela kushwele wentela kumele ngabe sebevele banikeze u-10% wemali efihliwe kuleyo minyaka lapho ushwele wentela wawungakaqali ukusebenza (2008, 2009 nango-2010). Iminyaka ngaphambi kwalokho abasangenisi ohlelweni lokuxolelwa kwentela futhi sekukude nokuthi luphathwe yi-Tax Agency.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ipolitiki yezomnotho » Inqubomgomo yezimali » Ushwele wentela eSpain
Ngabe asekhona yini amathuba ezimalini?